Axmed Karaash ?Khaatumo iyo wefdiga Puntland waxay iska kaashanayaan soo celinta Sool? (MAQAL) – Radio Daljir
Seteembar 11, 2013 3:15 b 0
Boocame, September 11, 2013 – Axmed Cismaan Cilmi (Karaash) oo ka mid ah madaxweynayaasha maamulka Khaatumo ayaa ka hadlay markii ugu horeysay halka ay marayaan wada-hadalo u dhexeeya madaxda khaatumo, iyo wefdiga madaxweyne ku xigeenka Puntland oo Taleex jooga.
Wuxuu sheegay Axmed Karaash in uu haatan meel wacan marayo qorshe lagu aruurinayo ciidamo ku sugan meelo ka tirsan gobolka Sool, kuwaas oo qeyb ka noqon doona qorshaha dib loogu soo celinayo magaalada Laascaanood ee xaruunta gobolka Sool, halkaas ?oo gacanta ugu jirta Soomaaliland mudo ku dhow 7 sano,
?Qorshaha waxaa iska kaashanaya oo ka wada-shaqeynaya wefdiga Gen. Cabdisamad ee Taleex iyo khaatumo, waxayna qeyb ka tahay wada-hadalkeena? ayuu yiri Axmed Karaash
Docda kale Axmed Karaash oo u waramay Radio Daljir wuxuu ka hadlay khilaaf soo kala dhex-galay madaxda khaatumo, wuxuuna si cad u sheegay in loo kala baxay Khaatumo iyo khiyaano, isagoo eedeyn u jeediyey dhinaca G12 oo uu ku jiro Cali Khaliif Galayr.
Wuxuu sheegay in madaxda G12 ay diidan yihiin isla markaasna ka soo horjeedaan safarka Madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdisamad Cali shire uu ku joogo Taleex, isagoo taas bedelkeeda sheegay in ?Madaxweyne ku xigeenka Puntland Gen. Cabdisamad Cali iyo khaatumo ay ka wada shaqeyn doonaan soo celinta deeganada Sool.
Madaxweyne Karaash wuxuu sheegay in ay jiraan abaabulo dagaal oo ka dhan ah wefdiga Cabdisamad Cali shire, kaas oo ay wadaan madaxda khaatumo qaarkood, wuxuuna canbaareyn u jeediyey qorshahaas oo uu ku tilmaamay mid aan macquul ahayn.
Dhegeyso:- Madaxweyne Axmed Karaash oo u waramay Khadar Cowl oo Daljir ka tirsan